စိုင်းစိုင်းလားရှိုး ( ရှင်ရဲထွတ် ): December 2008
Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 1:37 PM
Sunday, December 28, 2008 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 8:36 PM
ဤကဗျာသည် ကဗျာဟောင်းပါ ဟိုးလွန်ခဲ့သော ၈ နှစ်ကျော်ကာလဆီမှ စာရေးသူ၏ ပထမဆုံးသောကဗျာ လေးပါ။ စာရေးသူ ဘယ်လိုမှ မေ့လို့မရသော ကဗျာတစ်ပုဒ် အနေဖြင့် သက်ဆုံးတိုင် ထင်ကျန်ရစ်မယ့် ကဗျာလေးပါ။
Saturday, December 27, 2008 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 2:41 PM
နင်ပြောခဲ့တယ်နော်... မောင်ရယ် ချမ်းလိုက်တာတဲ့
နင်ပြောခဲ့တယ်နော်... မောင်ရယ် ဥသြလေး သနားလိုက်တာတဲ့
နင်ပြောခဲ့တယ်နော်... မောင်ရယ် ကျွန်မလေ ငိုချင်ရင် မိုးရွာထဲမှာပဲ ငိုတာတဲ့
ဒါပေမယ့် မိုးရွာခဲ့ရင် မိုးရေတွေထဲ ငါလည်း ငိုတတ်နေပြီ...
Sunday, December 21, 2008 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 8:07 AM
ကိုဝင်းဇော်ရဲ့ CHALLENGER ကို ဆားချက်ကြည့်ခြင်း
Wednesday, December 10, 2008 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 10:53 AM
ကိုဝင်းဇော်ရဲ့ အတွေးအမြင်လေးကို စာရေးသူ အနေနဲ့ သဘောကျပါတယ်။ ရေးသားတင်ပြပုံလေး ကောင်းပါတယ်။ စာ ရေးသူ အနေနဲ့ ဒီပို့စ်ကို ရေးသားရခြင်းဟာလည်း ကိုဝင်းဇော်ရဲ့ အတွေးအမြင်လေးကို သဘောကျလို့ပါ။ ပြီးတော့ စာရေး သူမှ ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး စာရေးသူရဲ့ ထင်မြင်မိတဲ့ အတွေးတွေကို ရေးချင်လာတဲ့ စိတ်တစ်ခုထဲပါ။ ( ကိုဝင်းဇော် နားလည် နိုင်ပါစေ။ )
စာရေးသူ အနေနဲ့ အခက်အခဲဆိုတာဟာ စိန်ခေါ်မှုလို့ မမြင်မိဘူး၊ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမှုလို့ မြင်မိတယ်။ ဘာလို့လည်းဆို စာ ရေးသူတို့ရဲ့ ဘ၀လမ်း တစ်လျှောက်မှာ မထင်မှတ်တဲ့နေရာ၊ မမျှော်လင့်တဲ့ အခက်အခဲဆိုတာ ကြုံလာတတ်တယ်၊ ကြုံ လာတဲ့ အချိန်မှာ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းဆိုတာ ရှိရတယ်၊ ( ဖြေရှင်းနိုင် မဖြေရှင်းနိုင် ဆိုတာကတော့ မိမိရဲ့ ပင်ကိုယ် အရည်အချင်းပဲလို့ စာရေးသူ မြင်မိတယ် )
ကြုံလာတဲ့ အခက်အခဲ မှန်သျှကို စိန်ခေါ်မှု အနေနဲ့ သတ်မှတ်ပြီး ရင်ဆိုင်မယ် ဆိုရင် ပထမဆုံး ဒီအခက်အခဲက ဘာ လည်း ? ငါဖြေရှင်းနိုင်မလား? ကွဲပြားအောင် စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးမှ ငါဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုရင် စိန်ခေါ်မှုကို လက်ခံလိုက်။ ဘက်မမျှတဲ့ စိန်ခေါ်မှုဆိုရင် ခံစစ်အနေနဲ့ သုံးသင့်ရင်သုံး၊ လိုအပ်ရင် ခွာစစ်ကိုပါ သုံးရလိမ့်မယ်။ ( ဥပမာ ကိုဝင်းဇော်ရေ မိုက်တိုင်ဆန်ရဲ့ လက်သီးကို ခံနိုင်ဖို့ မလွယ်ဘူးလေ )
တစ်ချို့ အခက်အခဲတွေက ကာယနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိသလို၊ ဥာဏနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့ စိန်ခေါ်မှု ဆိုတာရှိတယ်။ အဓိက ကတော့ ဘက်ပေါင်းစုံကို ကိုယ့်ဖက်က ပြင်ဆင်မှု အားကောင်းလေ အခက်အခဲကို အောင်မြင်အောင် ဖြေရှင်း နိုင် လေပဲ။ လောကကြီးမှာ စိန်ခေါ်မှုကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နိုင်တာ ကောင်းပါတယ်၊ မိုက်မဲမှု တွဲပါလာရင် အန္တရယ် များတယ် ဆိုတာ မမေ့လေနဲ့။
တိုက်စစ်ဆင်တာဟာ လွယ်ပေမယ့်၊ တစ်ဖက်ရဲ့ စိန်ခေါ်မှု အားအရမ်းသာလာရင် ခွာစစ်ကို သုံးတတ်ရမယ်။ ခွာစစ်ကို အ သုံးချတတ်ဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲပါတယ် တော်ရုံ အသုံးမပြုတတ်ပါဘူး၊ တိုက်စစ် ဆင်နွှဲရင်း အသေသာခံသွားကြတာ များပါ တယ်။ ဒီလို လူမျိုးဟာ စိန်ခေါ်မှု တစ်ရပ်ကို ကွဲပြားအောင် မသုံးသပ်ပဲ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း ကြလို့ပဲ။ ထိုလူမျိုးအတွက်တော့ ဘ၀မှာ ဆုံးရှုံးမှု များတတ်ပါတယ်။ ( ကိုဝင်းဇော်ရေ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ထင်တာလေးကို ဆားချက်ကြည့်တာပါ )
Saturday, December 6, 2008 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 10:13 AM
တစ်ချိန်တုန်းကပေါ့ ရွာလေးတစ်ရွာရဲ့ လူသွားလမ်းလေး နံဘေးမှာ သင်းပျံ့မွှေးကြိုင်ပြီး အလွန်တရာမှ စားလို့ကောင်းတဲ့ အသီးပင်လေးတစ်ပင် ရှိသတဲ့၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီအပင်လေးဟာ သူ့ရဲ့ အသီးတွေကို လူတိုင်းလည်း မမြင်ရဘူး လူတိုင်းကိုလည်း သူက စားခွင့်မပေး ဘူး တဲ့။ ခုထိ သူ့ရဲ့အသီးတွေကို ဘယ်သူမှ မမြင်ဖူး၊ မစားဖူးသေးဘူးတဲ့။
တစ်နေ့မှာ အဲဒီ ရွာလေးကို မိသားစု တစ်စု ပြောင်းလာခဲ့ကြတယ်။ ဒီမိသားစုလေးမှာ အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကျောင်းသူလေး အ ရွယ် ကောင်မလေး တစ်ယောက် ပါလာခဲ့တယ်။ ကောင်မလေး နေ့စဉ် တက်ရမယ့် ကျောင်းက အဲဒီ အပင်လေး ပေါက်နေတဲ့ လူသွား လမ်းလေး ကနေ ကျောင်းသွား ကျောင်းပြန် အမြဲ ဖြတ်သွား ဖြတ်လာ လုပ်ရတာပေါ့။ ဒါကို သစ်ပင်လေးက နေ့စဉ်မြင်နေရတယ်။ အဲဒီတော့ သူ့စိတ် ထဲမှာ ဒီကောင်မလေးကိုတော့ သူ့ရဲ့ အသီးလေးတွေကို ပေးစားချင်တဲ့ စိတ်တွေ ပေါ်လာရောတဲ့လေ။
တစ်နေ့ ကောင်မလေး ကျောင်းကအပြန် သစ်ပင်လေးက ကောင်မလေး မြင်သာအောင် သူ့ရဲ့ ရောင်စုံ သစ်သီးလေးတွေကို ကောင်မလေး တွေ့အောင် ပြလိုက်တော့တယ်။ ကောင်မလေးကလည်း မြင်သွားတော့ ၀မ်းသာအားရနဲ့ အရသာရှိတဲ့ အသီးလေးတွေကို ခူးစားတော့တာပေါ့။ သစ်ပင်လေးကလည်း ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ကောင်မလေး စားနေတာကို ကြည့်ပြီး ကြည်နူးနေတာပေါ့။
ကျောင်းဖွင့်တဲ့ ရက်တွေတိုင်း ကောင်မလေးက နေ့စဉ် တစ်နေ့တစ်လုံး ခူးစားလိုက်တာ ကြာလာတော့ ရာသီဥတုဒဏ်၊ အသီးလေးတွေကို သီးပေးရတဲ့ အင်အားနဲ့ သစ်ပင်လေး ခမျာ တော်တော်ပင်ပန်း လာတော့တာပေါ့။ ကောင်မလေးက ဒါတွေကို ဂရုမစိုက်မိပါဘူး၊ သစ်ပင်လေးက အဟာရတွေလိုလာပြီ အသီးတွေကို သီးပေးနိုင်ဖို့ တော်တော်ခက်လာပြီ၊ မရှိရှိတဲ့ အင်အားနဲ့ ကောင်မလေး လာရင်စားနိုင်အောင် တစ်နေ့တစ်လုံး သီးပေးနေတုန်းပါပဲ။
တစ်နေ့ညတော့ အဲဒီရွာလေးဟာ လေမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပါလေရောတဲ့၊ နဂိုကမှ အားအင်ကုန်ခမ်းနေတဲ့ အပင်လေးဟာ လေမုန်တိုင်းရဲ့ တိုတ်ခတ်မှုဒဏ်ကို မခံနိုင်ရှာတော့ ကောင်မလေး အတွက် အသီးတွေကို မသီးပေးနိုင်တော့ရှာဘူး၊ အချိန်တန်တော့ ကောင်မလေးက ရောက်လာပါလေရော။ အဲဒီ အချိန်မှာ အပင်လေးက အသီးမသီးပေး နိုင်တဲ့အပြင် အကိုင်းအခတ်တွေပါ ကျိုးပြက် နေပြီလေ။ ဒါကို မြင်တော့ ကောင်မလေးက ''အလကား အပင် အသီးလည်း မရှိဘူး'' ငြူစူ ပြီးထွက်သွားပါရောတဲ့။ ဒါကိုလည်းကြားရော အပင်လေးက ၀မ်းနည်းစွာနဲ့ ''သြော်. ကောင်မလေးရယ် ငါမင်းအတွက် အသီးတွေအများကြီး သီးပေးချင်ပါသေးတယ် ခုတော့ငါမတတ်နိုင်တော့လို့ပါ''
ပုံပြင်လေးရဲ့ အဆုံးသတ်မှာ အပင်လေးခမျာ စားသုံးသူ ကောင်မလေးရဲ့ ပြုစုခြင်းလည်း မခံရဘူး၊ အသီးလေးတွေ သီးမပေးနိုင်တော့ ငြူစူခံရတယ်။ အပင်လေး ဘာတွေဖြစ်နေလည်း၊ ဘာတွေလိုအပ်နေလည်းဆိုတာကို ကောင်မလေးက စိတ်မ၀င်စားဘူး၊ သူသိတာက အသီးလေးတွေစားဖို့ပဲ။ အပင်လေးခမျာ ခူးဆွတ်သူရဲ့ အလိုက်မသိမှုကြောင့် သက်တမ်းတိုတောင်းစွာနဲ့ပဲ ................
Tuesday, December 2, 2008 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 12:41 AM